Kolo anaka: ny tsara ho fantatra momba ny androbe | NewsMada
Par Taratra sur 22/05/2019
20–Manontany ny mpamaky iray hoe: «mety ho lasa androbe ve ny fanintona amin’ny zaza iray? »
Tsara ny mampahatsiahy fa ilay fihetsehan’aretina sendra mitranga rehefa tsy zakan’ ny atidohany ny maripana avy amin’ny aretina mety mahazo azy ny atao hoe fanintona eo amin’ny zaza. Ny mahatonga ny androbe kosa, araka ny voalaza teo aloha, ny trangana aretina mety mamela fery ary koa takaitra eo amin’ny atidoha. Ireto voalaza manaraka ireto no matetika mitranga eo amin’ny zaza mifanintona : eo amin’ny fahenim-bolana hatramin’ny faha-5 taony ny isehoany eo amin’ny zaza. Mihoatra ny 38°C ny maripana eo amin’ilay zaza .Tsy mihoatra ny dimy minitra ny faharetan’ilay fanintona ary tsy miverimberina. Mijanona tsy misy intsony ilay fanintona raha vao tafidina amin’ny laoniny ny maripana. Miverina salama tsara tsy misy mihitsy takaitra eo amin’ilay zaza rehefa tafidina ny maripana na koa tapitra ilay fanintona nahazo azy.
Tokony ho mailo anefa ny ray aman-dreny raha vao misy fihetsehana ivelan’ireo eo amin’ny zaza. Ao anatin’izany raha toa ka 37°5 C na latsak’izany ny maripana eo amin’ilay zaza. Ao koa ny fihetsehana misy eo amin’ny zaza vao teraka na zaza latsaka ny enim-bolana. Mety misy koa ampahan’ny vatana fotsiny no misy fihetsehana eo amin’ilay zaza na mety koa mitohy maharitra loatra ny fihovitrovitr’ilay zaza. Mety koa, mangana fotsiny ilay zaza na koa misy fahasemporana. Izany rehetra izany, manambara fa misy tsy mety ny fiasan’ny atidohan’ilay zaza ka tokony hanantona dokotera matihanina momba ny loha sy ny hozatra (Neurologue). Fa na izany na tsy izany, araka ny filazan’ny olon-kendry hoe tsara ny misoroka no ho ny mitsabo, tsy misy toy ny fitandremana. Kendrena izany ny tsy hisian’ny fanaviana raha vao tsy salama ny zaza.
21–Dr Raharison, eto am-pamaranana, inona ny azo amintinana ny tsara ho fantatra momba ny aretina androbe?
Zavatra telo ny tsara atao an-tsaina.
Aretina toy ny aretina rehetra ny androbe fa tsy avy amin’ny devoly na ny famosaviana velively!…
Aretina vokatry ny fikorontanan’ny fiasan’ny loha, na ampahany na koa iray manontolo ny androbe. Noho izany, rehefa torana ny olona iray, tsy voatery ho androbe ary tsy androbe velively avokoa akory ny olona tsy mahatsiaro tena rehetra. Ary raha toa ka ampahany fotsiny amin’ny atidoha no misy olana, mety miseho amin’ny alalan’ny fihetseham-batana izany. Mety koa ho fahatsapàna fotsiny ihany. Ao anatin’izany ny fahatsapana hoe mikorontana ny saina, na koa ny zavatra hita na zavatra heno. Misy aza olona toa mahita na mahatsapa zavatra toa efa niainany tany aloha tany. Ao koa ny mahatsapa fa toa hafahafa ka sanatria mirona na mandeha izy na koa mipetraka. Mety miseho manokana na koa harahina fahatoranana izany rehetra izany.
Manaraka izany, eo amin’ny zaza, tokony havahina ny fanintona tsotra sy ny krizin’androbe satria samy hafa ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana azy ireo ary indrindra, ny mety ho fiantraikany amin’ny fitomboana, ny fianarana ary ny hoavin’ilay zaza iray manontolo.
Tsara ny manamafy fa raha toa ka voatsabo sy voara-maso ara-dalàna ny marary, ho afaka hanana fiainana ara-dalàna eny ary lavorary aza. Hanampy azy hanana fahatokisan-tena sy finoana ho tafita amin’ny herin’ny tenany (psychothérapie et coaching) ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ny atidoha sy ny sainy (consultation neuropsychiatrique). Raisintsika ohatra amin’izany ireo olo-malaza nanamarika ny tantara toa an-dry: i Jules César, i Jeanne d’Arc, i Napoléon Bonaparte, i Alfred Nobel, i Albert Einstein izay misy zavatra iraisany satria samy voan’ny androbe izy ireo.
Raha fintinina fohy, tsy hoe zavatra tsy azo ihodivirana akory ny androbe fa tena aretina azo tsaboina tsara!…